घर > Palmitoylethanolamide (PEA)
यदि तपाईं उच्च-गुणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर बिक्रीको लागि, तब तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी चीनमा एक सबैभन्दा लोकप्रिय, ज्ञानी, र अनुभवी Palmitoylethanolamide (PEA) निर्माता हौं। हामी शुद्ध र राम्ररी प्याकेज गरिएका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं जुन सधैं विश्व-स्तरीय तेस्रो-पक्ष प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण र शुद्धताको लागि हुन्छ। हामी सँधै अमेरिका, यूरोप, एशिया, र विश्वको अन्य भागहरूमा अर्डर गर्दछौं। त्यसैले यदि तपाईं Palmitoylethanolamide खरीद गर्न चाहानुहुन्छ (मटर) सम्भव उच्चतम पाउडरको पाउडर, केवल हामीलाई cofttek.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
Palmitoylethanolamide के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
मटरका दुष्प्रभावहरू के-के हुन्?
के फेनिथ्यालेमाइन कानूनी हो?
PEA कति लामो हुन्छ?
के फेनिलेथिलेमाइन औषधि परीक्षण असफल हुन्छ?
के मटरको पूरक सुरक्षित छ?
मटरलाई किक गर्न कति समय लाग्छ?
के तपाईं स्टोरमा फेनाइलिथेलेमाइन किन्न सक्नुहुन्छ?
मटरले काम गर्न कति समय लाग्छ?
के मटरले निद्रामा मद्दत गर्दछ?
के मटर उत्तेजक हो?
तपाइँको प्रणालीमा फेनिलेथिलेमाइन कहिलेसम्म रहन्छ?
के चकलेटमा फिनाइलिथेलेमाइन हुन्छ?
फेनिलेथिलेमाइन कहाँ पाइन्छ?
के फेनिलेथिलेमाइनले तपाईंलाई उच्च दिन्छ?
Hordenine तपाइँको प्रणाली मा कहिले सम्म रहन्छ?
Palmitoylethanolamide (PEA) सुरक्षित छ?
Palmitoylethanolamide कहाँ पाउन सकिन्छ?
मटर क्रीम के हो?
हामीलाई किन Palmitoylethanolamide (PEA) चाहिन्छ?
फाइब्रोमाइल्जिया को लागी PEA के हो?
न्यूरोपैथिक दर्द राहत के हो?
म न्यूरोपैथिक पीडाले कसरी सुत्न सक्छु?
के पिउने पानीले न्यूरोपैथीमा मद्दत गर्दछ?
मटर तरल केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
मटर कहाँबाट आउँछ?
मटरको उपचार के हो?
के हाइपोभोलेमिया बिरामीहरूमा मटर आम छ?
निम्नलिखित मध्ये कुन मटर तालको सम्भावित उल्टो कारणहरू हुन सक्छ?
Palmitoylethanolamide (PEA) endocannabinoid परिवार, फ्याट्टी एसिड एमाइडहरूको एक समूहको हो। पीईए एनाल्जेसिक र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गतिविधि भएको प्रमाणित भएको छ र विभिन्न अन्तर्निहित क्लिनिकल अवस्थाहरू भएका वयस्क बिरामीहरूमा दीर्घकालीन पीडाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित धेरै नियन्त्रणित अध्ययनहरूमा प्रयोग गरिएको छ।
को डोजमा लिइयो 500mg-1.5g प्रति खुराक, हरेक केहि घण्टा, पीईए प्रयोगकर्तालाई उत्साह, ऊर्जा, उत्तेजना, र समग्र कल्याणको भावना प्रदान गर्दछ। Esp जब माओ-बी अवरोधक, hordenine संग संयुक्त, PEA खुशीको सम्पूर्ण नयाँ स्तर र समग्र खुशी मा लिन्छ।
कुनै ज्ञात समस्याग्रस्त साइड इफेक्टहरू छैनन्। PEA कुनै पनि अन्य पदार्थ सँगै लिन सकिन्छ। यसले क्लासिक एनाल्जेसिकहरू र एन्टी-इन्फ्लेमेटरीजको पीडा-राहत प्रभावलाई बढाउँदछ। Palmitoylethanolamide कुनै साइड इफेक्ट बिना अन्य पदार्थहरु संग संयोजन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Phenethylamine (PEA) एक जैविक यौगिक, प्राकृतिक मोनोमाइन क्षारीय, र ट्रेस अमाइन हो, जुन मानवमा केन्द्रिय स्नायु प्रणाली उत्तेजकको रूपमा कार्य गर्दछ।
जब मुखले लिन्छ: पाल्मिटोयलेथेनोलमाइड लिनु भनेको प्रायः वयस्कहरूको लागि POSSIBLY SAFE हो जब3महिना सम्म प्रयोग गरिन्छ। सम्भावित साइड इफेक्टहरू, जस्तै दुखी पेट, धेरै दुर्लभ छन्। यदि palmitoylethanolamide months महिना भन्दा बढी प्रयोग गर्न सुरक्षित छ भनेर जान्न पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी छैन।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि melatonin कडाईका साथ खाद्य र औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा विनियमित छैन। त्यो किनभने melatonin एक औषधि मानिदैन। तसर्थ, यो भिटामिन र खनिजहरू जस्ता आहार पूरकको रूपमा बेच्न सकिन्छ, जुन एफडीएले नजिकबाट निगरानी गर्दैन।
PEA एक प्राकृतिक पदार्थ शरीर द्वारा उत्पादित छ; यो धेरै प्रभावकारी र सुरक्षित छ पीडा र सूजन को पूरक को रूप मा प्रयोग गर्न।
मटरलाई min देखि days० दिन लाग्छ। मटर चाँडो अंकुरण हुनेछ यदि माटोको तापक्रम to7देखि degrees० डिग्री फारेनहाइट छ भने। तपाईंले अंकुरण प्रक्रिया तीव्र पार्न सक्नुहुन्छ मटर रोप्नु अघि २ to देखि hours 30 घण्टा भिजाएर। होईन, त्यहाँ अन्य कारकहरू पनि छन् जसले मटर कती चाँडो पलाउँछ र बढ्छ भनेर असर गर्दछ।
यी पूरकहरू खपत गर्दा दिमाग गतिविधि को स्तर बढाउन र तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो काउन्टरमा उपलब्ध छ, र यसलाई खरीद गर्नको लागि एक सिफारिसको आवश्यक पर्दैन। Phenylethylamine फोकस र एकाग्रता बढाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
हामीले सयौं न्यूरोपैथिक दुखाई बिरामीहरूको उपचार गरेपछि यस उपचार तालिकाको विकास गर्‍यौं। हाम्रो क्लिनिकल अनुभवको आधारमा, हामी अनुमान लगाउँछौं कि PEA को सबलिual्गुअल फारम कम्तिमा १० दिनको लागि सुरू गर्नाले PEA को पर्याप्त चिकित्सकीय स्तरहरू द्रुत रूपमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
शरीरमा स्वाभाविक रूपमा पाइने फ्याटको एक प्रकारको राम्रो रातको निद्राको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। अन्वेषकहरूले आशा राखेका छन् कि PEA - वा palmitoylethanolamide को रूपमा चिनिने अणु - निद्रामा मात्र सहयोग गर्न सक्दैन तर दुखाइसँग लड्न र सूजन कम गर्न सक्छ।
यो अन्य दुखाइ औषधीको साथ वा एक्लै लिन सकिन्छ, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा पेशेवरले सल्लाह दिए जस्तै, दर्द राहतलाई समर्थन गर्न। PEA ले अनुहारमा पनी बढि औषधिहरूमा निर्भरता कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन अनावश्यक साइड इफेक्टहरूको कारण गर्दछ। अधिकतम लाभ लिनको लागी months महिना लाग्न सक्दछ तर परिणाम typically--3 हप्तामा देखा पर्दछ।
फिनाइलिथेलेमाइनको कुनै खानामा चकलेटमा सबैभन्दा बढी एकाग्रता हुन्छ, जुन दिमागमा उत्पादित रासायनिक हो जब व्यक्ति प्रेममा हुन्छन्। अझै "चकलेट एम्फेटामाइन" को भूमिका विवादास्पद छ। धेरै जसो सबै चकलेट-व्युत्पन्न फेनाइलिथिलामाइन Cabs पुग्न अघि मेटाबोलिज्ड हुँदैनन्।
स्तनपायीहरूमा, फेन्नेथ्यालेमाइन एमिनो एसिड एल-फेनिलालाइनबाट एन्जाइम सुगन्धित एल-एमिनो एसिड डेकार्बॉक्सीलेज मार्फत इन्जाइमेटिक डेकारबॉक्सीलेसन मार्फत उत्पादन गरिन्छ। स्तनपायी प्राणीहरूमा यसको उपस्थिति बाहेक, फेनेथेलाइमाइन अन्य थुप्रै जीवहरू र खाद्य पदार्थहरूमा पाइन्छ, जस्तै चकलेट, विशेष गरी माइक्रोबियल किण्वनपछि।
प्रति खुराक m००mg-500g को खुराक लिईन्छ, हरेक केही घण्टा, PEA ले प्रयोगकर्तालाई उत्साह, उर्जा, उत्तेजना, र समग्र कल्याणको भावना प्रदान गर्दछ। Esp जब माओ-बी अवरोधक, hordenine संग संयुक्त, PEA खुशीको सम्पूर्ण नयाँ स्तर र समग्र खुशी मा लिन्छ।
जौमा, होर्डिनेन स्तर अंकुरणको –-११ दिन भित्रमा अधिकतममा पुग्छ, त्यसपछि बिस्तारै घट्छ जबसम्म एक महिना पछि मात्र ट्रेस रहन्छ। यसबाहेक, होर्डिनेन मुख्यतया जरामा स्थानीयकृत हुन्छ।
जे होस् Palmitoylethanolamide शरीर द्वारा राम्रोसँग सहन छ, यदि व्यक्तिले कुनै साइड इफेक्ट देखे भने, उनीहरूलाई खुराकको मात्रा घटाउन दिन 400०० मिग्रि गर्न सल्लाह दिइन्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पाउन्ड तीन महिना भन्दा बढी लिनुहुन्न। PEA को स्थिर प्रयोगले पेटको समस्या निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि यो साईड-इफेक्ट हो जुन विरलै मात्र याद गरिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पीईए छाला र गर्भवती र स्तनपान गर्ने महिलाहरूमा प्रयोग गरिनु हुँदैन किनभने त्यहाँ पर्याप्त अनुसन्धान वा प्रमाण छैन कि दाबी यी समूहहरु को लागी सुरक्षित छ भनेर। त्यस्तै, यदि तपाईं कुनै सर्तमा पीडित हुनुहुन्छ भने, Palmitoylethanolamide जस्ता पूरक लिनु अघि चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ।
जवाफ हो Cofttek। कोफ्टेक एक पूरक कच्चा माल निर्माता हो जुन २०० in मा अस्तित्वमा आएको थियो। कम्पनीले यसको अत्यधिक कुशल अनुसन्धान तथा विकास टोलीमा ठूलो गर्व लिन्छ जुन क्लाइन्टहरूलाई प्रदान गरिएको कच्चा माल एकदम उच्च गुणको छ भनेर सुनिश्चित गर्न चौबीसै घण्टा काम गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीले जैविक टेक्नोलोजी र विश्लेषणात्मक परीक्षणमा भारी लगानी गर्छ। कम्पनीले बेचेको सबै उत्पादनहरू उनीहरूको ठूलो-स्तर, उच्च-टेक बायोकेमिकल कारखानामा सिर्जना हुन्छन् जुन परिपक्व आपूर्तिकर्ता प्रणाली र नवीनतम प्राविधिक सुविधाहरूको गर्व गर्दछ। यो प्रतिबद्धता यही हो कि कम्पनीले उच्च-गुणवत्ताको कच्चा मालको उत्पादन गर्न बनाएको छ जसले कफटेकलाई कच्चा माल बजारमा एक मान्यता प्राप्त नाम बनाएको छ। आज, यो दुनिया भर मा ग्राहकहरु छ।
मटर क्रीम एक क्रीम हो जसले प्राकृतिक र सुरक्षाात्मक पदार्थ पाल्मिटोयलेटानोलामाइड (PEA) को इष्टतम एकाग्रता समावेश गर्दछ। PEA क्रीम त्यसैले शरीरमा क्याप्सुल को प्रभाव को लागी एक राम्रो पूरक को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Palmitoylethanolamide (PEA) एक फ्याटी अणु हो जुन शरीरसँग थोरै मात्रामा उत्पादन हुन्छ, प्राय जसो ऊतक बिग्रने वा टिश्यू वा मांसपेशिको चोटपटकमा। पीईए प्राकृतिक रूपमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पीडा वा सूजनको प्रतिक्रियामा उत्पादन गरिन्छ। Palmitoylethanolamide, PEA को रूप मा पनि चिनिन्छ एक प्राकृतिक रूप बाट हुने लिपिड हो जो फ्याटी एसिड एमाइड समूहको मुनि हुन्छ। यद्यपि यो कम्पाउन्ड शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित गरिएको छ, यो पशु र बोटहरूमा पनि अवस्थित छ र यसैले बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै अण्डाको पहेंलो, सोया लेसिथिन, अल्फल्फा, दूध, बदाम र सोयाबीन। पीईएको पावर एनाल्जेसिक गुणहरू छन् र यसले शरीर भित्र थुप्रै कुञ्जी शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई प्रभाव पार्न सक्षम छ।
पीईए प्राय: विरोधी भड़काउने र दर्द कम गर्ने उद्देश्यका लागि लिइएको हो। त्यसोभए, PEA ले शरीरमा एक पटक कसरी काम गर्छ? एक पटक शरीर भित्र, PEA बाध्य प्रक्रिया पछि पनी सेल को भड़काउने समारोह बन्द स्विच कि एक लक्षित साइटमा बाँध्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, केहि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि पीईएको एनाल्जेसिक प्रभाव यौगिकको पीडा संकेतहरू सार्नका लागि जिम्मेवार विशेष प्रतिरक्षा कोषहरूको कार्यमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने क्षमतालाई श्रेय दिन सकिन्छ। जे भए पनि सहि संयन्त्र के हो, एक कुरा पक्का छ कि पीईएले न्यूरोपैथिक दुखाइको साथसाथै सुजन प्रदान गर्दछ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, Palmitoylethanolamide (PEA) यसको लोकप्रियता मा अचानक वृद्धि देखिएको छ। यद्यपि पीईएको चिकित्सीय गुणहरू १ 1950 s० को दशकमा फेला पारिएको थियो र त्यसबेलादेखि वैज्ञानिकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले यस परिसरको विस्तृत अध्ययन गरेका छन्, विगत केही वर्षहरूमा पीईएमा चासो धेरै गुणा बढेको छ। यो मुख्य रूपले सुरक्षा र उपचार भूमिकाको कारणले हो कि यौगिक शरीर भित्र खेल्न सक्दछ साथ साथै यसको विभिन्न प्रकारको सूजन र न्यूरोपैथिक मुद्दाहरूको ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमताको कारण।
यद्यपि मानव शरीरले धेरै थोरै मात्रामा पीईए उत्पादन गर्दछ र प्राय: जसो भए पनि यो राशिले सूजन र पीडा कम गर्न पर्याप्त हुँदैन र यसैले मानिसहरूलाई पीईए पूरक आहार लिन सल्लाह दिइन्छ। पीडा र सूजन को कम PEA को धेरै फाइदाहरू मध्ये एक हो।
अस्वाभाविक रूपमा हुने पदार्थ PEA पूरक अष्ट्रेलियामा वर्गीकृत गरिएको छ, र धेरै अन्य देशहरू, एक खाद्य उत्पादन को रूप मा, एक औषधि छैन। पीईए लाई एन्टीइन्फ्लेमेटरी, एन्टिनोसाइसेप्टिभ, एन्टिकोनभाल्सन्ट र न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणहरू देखाइएको छ र तीव्र दर्दको उपचारमा तीव्र रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
न्यूरोपैथिक पेन उपचार एन्टिकोनवाल्सेन्ट र एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू प्राय जसो उपचारको पहिलो लाइन हुन्छन्। केही न्यूरोपैथिक पीडा अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि गैर-स्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) को प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै एलेभ वा मोट्रिनले दुखाइ कम गर्न सक्छ। केहि व्यक्तिहरुलाई कडा पेनकिलर चाहिन सक्छ।
तपाईंको घुँडा माथि संग सुत्दा उन्नत तपाईको नसोचो जरामा तपाईंको काठ डिस्कहरु को दबाव को कम गरी आफ्नो पीडादायी लक्षणहरु लाई कम गर्न सक्छ। आफ्नो पछाडि फ्लैट झूट राख्नुहोस् your ओछ्यानको साथ सम्पर्कमा तपाईंको हिल र नितम्बहरू राख्नुहोस् र घुँडा अलिकता छतमा घुमाउनुहोस्।
स्नायु दुखाइ कम गर्न रणनीति। मधुमेह को शीर्ष मा राख्नुहोस्। यदि तपाईंलाई मधुमेह छ भने, रगतमा चिनी नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। यसलाई बन्द गर्नुहोस्। व्यायामले एन्डोरफिन भनिने प्राकृतिक पेनकिलर रिलीज गर्दछ। तपाइँको खुट्टा लापर यदि खुट्टा तंत्रिका दुखाइबाट प्रभावित छन् भने यो समय राम्रो खुट्टा हेरचाहमा केन्द्रित गर्ने हो।
न्यानो पानी आराम मात्र होइन, तर यसले तपाईंको शरीरभरि सर्कुलेशन पनि बढाउन सक्दछ। "यसले द्रुत राहत दिन सक्छ," Vinik भन्छन्। तर किनभने मधुमेह न्यूरोपेथीले सनसनी गुम्न सक्छ, यो पक्का गर्नुहोस् कि पानी भित्र पस्नु भन्दा पहिले तातो छैन।
गर्भवती महिला द्वारा प्रयोग गर्न को लागी। Palmitoylethanolamide पोषण सूजन र पुरानो पीडा सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो केवल चिकित्सा पर्यवेक्षण अन्तर्गत लिनु पर्छ।
Palmitoylethanolamide बोसो बाट बनेको एक रसायन हो। यो स्वाभाविक रूपमा खाना जस्तै अण्डको बोक्रा र बदाम, र मानव शरीर मा पाइन्छ। यो औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरीन्छ।
एपिनेफ्रिन पल्सलेस बिजुली गतिविधि (पीईए) पक्राउको बखत प्रत्येक -1- minutes मिनेट इंट्राभेन्सियस / इंट्रासोसियस (IV / IO) १-मिलीग्राम डोजमा प्रशासित गर्नुपर्छ। इपेनिफ्रिनको उच्च खुराक अध्ययन गरिएको छ र प्रायः बिरामीहरूमा जीवित रहन वा न्यूरोलोगिक नतिजामा कुनै सुधार देखाउँदैन।
पीईए इटियोलॉजीजको स्पेक्ट्रममा, स्यूडो-पीईए प्रायः हाइपोभोलिमिया, टाकिडिस्रिएमिया, ह्रदयको संकुचन कम भएको, वा रक्तचापमा अवरोधहरू, जस्तै पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेम्पोनेड, र तनाव न्यूमोथोरैक्सको कारण हुन्छ।
Hypovolemia र hypoxia PEA का दुई धेरै सामान्य कारणहरू छन्। तिनीहरू पनि सजिलैसँग उल्टो गर्न सकिने हुन् र कुनै पनि विभेदक निदानको शीर्षमा हुनुपर्दछ। यदि व्यक्तिसँग सहज संचलन (ROSC) को फिर्ती छ भने, पोस्ट-कार्डियक अरेस्ट केयरमा अगाडि बढ्नुहोस्।
पछिल्ला केही बर्षहरूमा, Palmitoylethanolamide को लोकप्रियता एक ठूलो वृद्धि देखीएको छ, मुख्यतया किनभने मान्छे यसको धेरै उपयोगहरु को बारे मा अधिक सजग भएको छ। आजका दिनहरूमा लोग Palmitoylethanolamide मुख्यतया यसको एनाल्जेसिक प्रभावको लागि प्रयोग गर्छन्, तर यो अक्सर लू गहेरिग रोग, मधुमेह न्यूरोपैथी, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया, कार्पल टनेल सिन्ड्रोम, जलबिन्दु, अटिजम, एक्जिमा, एंडोमेट्रिओसिस जस्ता गम्भीर रोगहरू विरुद्ध पनि सिफारिस गरिन्छ। अन्य विकारहरूको एक प्रकार। आजका दिनहरूमा, Palmitoylethanolamide (PEA) सप्लीमेन्टहरू पनि व्यक्ति द्वारा वजन घटाउन प्रचार गर्न प्रयोग भइरहेको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।
① प्रारम्भिक अनुसन्धानले लु गेह्रिग रोगको उपचारमा नतिजा परिणाम दिन्छ
लू गेह्रिज रोग वा एमियोट्रोफिक लेटल स्क्लेरोसिस (एएलएस) एक जीवनलाई जोखिममा पार्ने रोग हो जसले मोटर न्यूरोन डिजेरेसन र अन्ततः प्रगतिशील पक्षाघात निम्त्याउँछ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँदछ कि palmitoylethanolamide जब riluzole संग लिईन्छ, यस अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। पीईए एक एन्डोकानाबिनोइड हो जसले ALS बिरामीहरूमा पल्मोनरी प्रकार्य सुधार गर्दछ।
② यसले कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको साथ मद्दत गर्दछ
कार्पल टनेल सिन्ड्रोम यस्तो अवस्था हो जसले हातलाई असर गर्छ। यस अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरू हातमा झुकाव र सुन्न अनुभव गर्दछन्। सर्तले सानो औंला बाहेक सबै औंलाहरू सहित सम्पूर्ण हातलाई प्रभाव पार्छ। एक २०१ study को अध्ययनले पत्ता लगायो कि पीईए प्रभावी रूपमा कार्पिल टनेल सिन्ड्रोम सहितको कम्प्रेसन सिन्ड्रोमको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैले, पीईए पूरकहरू कारपल टनेल सिन्ड्रोमले गर्दा हुने दुखाइ र बेचैनी नियन्त्रण गर्न लिन सकिन्छ।
③ यो मधुमेह न्यूरोपैथी र फाइब्रोमायाल्जिया बिरूद्ध पनि प्रभावकारी छ
मधुमेह न्यूरोपैथी मधुमेह-प्रेरित तंत्रिका क्षति हो। मधुमेह न्यूरोपैथीको सबैभन्दा सामान्य लक्षण मध्ये एक खुट्टा र खुट्टामा दुखाइ हो। अर्कोतर्फ फाइब्रोमायाल्जिया यस्तो अवस्था हो जसले मांसपेशिमा प्रणालीलाई असर गर्छ। थकान र मेमोरी मुद्दाहरूको साथसाथै, फाइब्रोमाइल्जियाको सबैभन्दा सामान्य लक्षण सम्पूर्ण मस्कुलोस्केलेटल प्रणालीमा दुखाइ हो।
दुबै मधुमेह न्यूरोपैथी र फाइब्रोमाइल्जिया पीडादायी अवस्थाहरू हुन् जुन धेरै असामान्य छैनन्। भाग्यवस, यी दुबै सर्तहरूसँग सम्बन्धित पीडालाई पाल्मिटोयलेथेनोलमाइड प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
④ यो बहु Sclerosis को लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
मल्टिपल स्क्लेरोसिस यस्तो अवस्था हो जहाँ प्रतिरक्षा प्रणालीले माईलिनमा आक्रमण गर्न थाल्छ जुन स्नायुहरूलाई ढाक्छ, जसले फलस्वरूप मस्तिष्क र शरीरको बाँकी भागको बीचमा कम वा कुनै सञ्चार हुन सक्छ। यो रोग पूर्ण रूपमा असक्षम हुन सक्छ। यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँदछ कि पीईए, जब इन्टरफेरोन-बीटा १ एको संयोजनमा दिइन्छ, मल्टिपल स्क्लेरोसिससँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
⑤ यो Glaucoma र टेम्पोरोन्डिबुलर डिसअर्डरहरू विरूद्ध प्रभावकारी हुन्छ
ग्लाकोमा एक अवस्था हो जुन अप्टिक स्नायुलाई असर गर्दछ र 60० बर्ष वा माथिका व्यक्तिहरू बीच अन्धाताको एक प्रमुख कारण हो। टीएमजे डिसअर्डरहरू, अर्कोतर्फ, जबडा दुखाइ दिन्छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि palmitoylethanolamide वा PEA यी दुवै अवस्थाका कारण हुने पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
⑥ अन्य लाभहरू
माथि उल्लेखित उपयोग बाहेक, PEA स्नायु दुखाइका साथै पोस्ट-सर्जरी पोस्ट एनाल्जेसिकको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ। केहि अवस्थाहरूमा, यो अन्य अवस्थाहरू जस्तै टाउको दुख्ने, डिप्रेसन, एक्जिमा, एन्डोमेट्रियोसिस, अटिजम, किडनी रोग र भल्भार दुखाईको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिएको छ। PEA ले वजनको बिरूद्ध केही प्रभावकारिता पनि देखाएको छ। यद्यपि यी क्षेत्रहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
वर्षौंको बखत, बिभिन्न अध्ययनहरूले बिभिन्न खुराक प्रयोग गरेको छ र यसैले कुनै पनि खुराक उत्तम मानिदैन। जहाँसम्म, व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको Palmitoylethanolamide (PEA) खुराक सेवन प्रति दिन 300-1,200 मिलीग्राम मुनि राख्न सल्लाह दिइन्छ। ती Palmitoylethanolamide पूरक लिनेहरूलाई दिनको ice 350-400-2०० मिलीग्राम लिन सल्लाह दिइन्छ र खुराक अवधि कुल २ महिना भन्दा बढी हुनुहुन्न।
(1) गेब्रिएला कोन्टारिनी, डेभिड फ्रान्सेचिनी, लौरा फेकि, मसिमो बार्बेरटो, पिट्रो जियोस्टी र मोरेना जुसो (२०१)) 'एक सह-अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड पाल्मेटोइलेथेनोलमाइड / ल्युटोलिन कम्पोजिटले क्लिनिकल स्कोर र रोग-प्रासंगिक आणविक मार्करहरूलाई प्रयोगात्मक अटोइम्यून एन्सेफलोमाइलाइटिसको माउस मोडलमा कम गर्दछ', न्यूरोइनफ्लेमेसनको जर्नल,
(2) मारिया बीट्रिस पासवंती, एनिल्लो अल्फिएरी, मारिया कैटरिना पेस, भिन्सेन्पो पोटा, पासक्वे स्यानसोने, जियाकोमो पिसिन्नो, मानिलियो बार्बेरिसी, कैटरिना अरिलियो र मार्को फिओर (२०१ 2019) 'दर्द व्यवस्थापनमा palmitoylethanolamide को क्लिनिकल अनुप्रयोगहरू: एक scoping समीक्षाको लागि प्रोटोकल', व्यवस्थित समीक्षा मात्रा,
(3) एलेनोरा पाल्मा, जोर्गे मौरिसियो रेयस-रुइज, डिएगो लोपरगोलो, क्रिस्टिना रोजेटी, क्रिस्टिना बर्टोलिनी, गेब्रिएल रुफोलो पिरेजेंलो सिफेल्ली, इमानुएला ओन्टे, क्रिस्टिना लिमातोला, रिकार्डो मिल्ली, मौरिजियो इन्गिलरिड (२०१ 2016) 'एएसटीयलकोलिन रिसेप्टर्सहरू मानव मांसपेशिबाट एएलएस थेरापीको लागि औषधि लक्षितको रूपमा' प्रोक नेटल एकेड साइ युएस ए,
(4) डि सिजारे मन्नेल्ली, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (२०१)) 'Palmitoylethanolamide परिधीय न्यूरोपैथीमा एक रोग-परिमार्जन एजेन्ट हो: दुखाइ राहत र न्यूरोप्रोटेक्शन एक पीपीएआर-अल्फा-मेडिएटेड मेकानिजम साझा गर्नुहोस्', मध्यस्थता सूजन।
(5) PALMITOYLETHANOLAMIDE (PEA) (544 31--0१-०)
(6) EGT अन्वेषण गर्न यात्रा
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) - तपाईंको जीवनको जादूगर
(8) आनंदमाइड VS सीबीडी: तपाईंको स्वास्थ्यको लागि कुन राम्रो छ? उनीहरूको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(9) निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
(10) म्याग्नेशियम L-Threonate पूरक: लाभ, खुराक, र साइड इफेक्ट
(11) शीर्ष Res स्वास्थ्य लाभ रेसेराट्रोल पूरकहरूको
(12) फास्फेटिडेल्सरिन (PS) लिने शीर्ष5फाइदाहरू
(13) पायरोलोकोइनोलिन क्विनोन (PQQ) लिने शीर्ष5फाइदाहरू
(14) अल्फा GPC को सर्वश्रेष्ठ Nootropic पूरक
(15) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) को सर्वश्रेष्ठ एंटी एजिंग पूरक
Bardzo bolą mnie stawy i mięśnie, mam tez słabą odporność czy przyjmowanie PEA pomoże mi। Choruje również na nerwicę lękową czy to nie będzie kolidować z psychotropami।
मेरो कुकुरको लागि सुरक्षित छ जुन लाइम लाइम्स रोग हो?
तपाईंसँग यहाँ अद्भुत साइट छ तर म जान्न चाहन्थें कि तपाईंलाई यहाँ कुरा गरिएका उही विषयहरू कभर गर्ने कुनै सामुदायिक फोरमहरू थाहा छ? म साँच्चै समुदायको एक हिस्सा बन्न चाहन्छु जहाँ म समान रुचि साझा गर्ने अन्य अनुभवी व्यक्तिहरूबाट सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्छु। यदि तपाइँसँग कुनै सुझाव छ भने, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस्। तिमीलाई आशिर्वाद रहोस्!
गर्मी देखि म PEA (र CoQ10) लिइरहेको छु। सुरुमा, म यो पेटको समस्याहरूको कारण सहन गर्न सक्दिन। अब मेरो दिमाग धुँवा र टाउको दुखाइ लगभग समाप्त भएको छ, जुन धेरै अनौंठो हो किनभने म दिनहुँ तिनीहरूलाई पाउँदछु।
म वास्तवमै PEA लिन्छु। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्सहरूमा कार्य गर्दछ। क्यानाबिनोइड्स जस्तै CBD सँग लिँदा यसले एक थप असर पार्दछ। यो सामान्यतया १,२००mg / दिनमा लिन्छ तर म m००mg मात्र लिन्छ किनकि मँ CBD को यति उच्च डोजमा छु (२००mg / दिन)।
पीईए स्वाभाविक रूपले शरीरमा देखा पर्दछ, नसनको लत बिना, तपाईं सहनशीलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न र यो १ 1950's० को दशकदेखि अध्ययनमा पीडा र जलनको लागि प्रभावकारी साबित भएको छ।
मेरो पतिले यो लिन्छ र यो महान् छ जस्तो लाग्छ।
तपाईंले यस वेबसाइटलाई लेख्नमा गर्नुभएको प्रयासको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पछि पनि तपाईंबाट उही उच्च-ग्रेड सामग्री हेर्न आशा गर्दैछु। वास्तवमा, तपाईंको रचनात्मक लेखन क्षमताहरूले मलाई मेरो आफ्नै व्यक्तिगत साइट प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गरेको छ;)
किनभने COVID-19 को एक उच्च जोखिम एक साइटोकिन आँधी हो जस्तो देखिन्छ जहाँ हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले भाइरससँग लड्न पर्याप्त प्रतिजीवीहरू सिर्जना गर्न सक्नु अघि यो एक सुरक्षित पूरक हो जसले साइकोकिन्सको मात्रा घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। यस रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई अनुमति दिन राम्रो तरिका।
कृपया यसलाई राम्रोसँग राख्नुहोस्!
मेरो लागी यो सूजन को लागी मद्दत गर्दछ। राम्रो स्लीप एड पनि, आधा खुराकबाट धेरै निन्द्रा प्राप्त गर्नुहोस्।
यो सामान आशाजनक देखिन्छ
स्ट्रीमि J जाभ
मेरो इम्यूनोलोजिस्टले Palmitoylethanolamide सिफारिश गरे। मैले ica महिनाको लागि मिरिका PEA लिए। यो निश्चित हुन गाह्रो छ। मेरो लक्षणहरू धेरै सुधार भएको छ, तर धेरै समय पनि बितिसकेको छ। मैले भर्खरै यो लिन छोडिदिएँ र मैले महसुस गरेको तरिकामा महत्त्वपूर्ण भिन्नता याद गरिरहेको छैन। यो लिँदा मलाई कुनै साइड इफेक्ट भएन, त्यसैले कम्तिमा पनि यसले चोट पुर्‍याएको देखिदैन।
धेरै चीजहरू खाली पेटमा राम्रो हुन्छन्, जबसम्म तिनीहरू गम्भीर रूपमा समर्थन गर्दैन सुधार शोषण र न केवल फ्याट-घुलनशीलता, जबकि उनीहरूले पेटको समस्यालाई निम्त्याउँदैनन् (जस्ता)।
मैले यसलाई खाली पेटमा लिएँ र सायद मैले धेरै पटक गरेको छु।
स्वागत छ मैले एक जोखिम लिए र केहि आज अर्डर। पेट दुखाई थकित आशा छ कि यो काम गर्दछ।
Palmitoylethanolamide एक अंतर्जात फैटी एसिड एमाइड हो। यसको मतलब यो अहिले तपाईको शरीरमा छ।
केही व्यक्ति केवल यसलाई कम बनाउँछन्, र तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा तपाईंको स्तरहरू खस्छन्। त्यसैले पूरकले ती स्तरहरूलाई फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्दछ। यो खानामा पनि पाइन्छ। यो धेरै सुरक्षित छ। अधिकांश व्यक्तिहरू यो के हो बुझ्दैनन् र विन्दु पूर्ण रूपमा मिस गर्दछन्।
यदि तपाइँ कोही हुनुहुन्छ जुन तपाइँको शरीरमा PEA को राम्रो प्राकृतिक स्तरहरू छन् भने, तपाइँलाइ केही पनि महसुस हुँदैन। यद्यपि, स्वाभाविक रूपमा निम्न स्तरमा भएका मानिसहरूले प्रभावहरू कडा रूपमा महसुस गर्छन्। यसैले तपाईं यसमा ध्रुवीकरण हेराइहरू देख्नुहुन्छ।
दुखाइको लागि मैले भर्खरै पीईए पत्ता लगाए जुन मैले दैनिक १२०० मिग्रिमा लिदै छु र यसले मद्दत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ
अर्को दिन उहाँकी आमा गाउरो रोगविद्लाई भेट्न जानुभयो, र उनको बायोमार्कर्सलाई सूजनको लागि बताइएको थियो, पहिलो पटक हो! मलाई ठ्याक्कै याद छैन - र मलाई पक्का विश्वास छ मेरी आमाले - कुन मापदण्ड प्रयोग गर्दै थिए, तर उनले मलाई कुल इन्फ्लेमेन्टको बायोमार्करको लागि इष्टतम दायरा ०--0० बीचमा बताइन्, र उनी सामान्य रूपमा सकुशल छिन। Time०। यस पटक, उनी १ at वर्षकी थिइन।
मैले लगातार मेरो आधा घण्टा कफीको कपको साथ यो वेबपृष्ठको सामग्री पढ्न हरेक समय खर्च गरें।
Palmitoylethanolamide दाह र दुखाइको लागि उत्तम हो। ओलीआमाइड निद्राको लागि उत्तम छ। दुबै प्रतिरक्षाको लागि राम्रो छन्। हामीले हाम्रो प्रतिरक्षा डिफेन्समा PEA छनौट गर्‍यौं ताकि तन्द्रा नहोस्।
मसँग माइग्रेन पनि अक्सर हुन्छ, प्राय: महिनामा १-२ पटक र Palmitoylethanolamide मेरो लागि चमत्कार हो माइग्रेन भएको बेला।
म पाउडरमा PEA लिदै छु। मैले पाइरहेको सबै अन्य चीजहरूमाथिको पीडामा हल्का सुधार गर्न मैले यसलाई फेला पारेको छु।
एक हो (P) Phenyl (E) ईथिल (A) अमाइन र अर्को P (Pal )oyl (E) इथेनॉल (A) amide छ। साथै, व्यक्तिहरू फेनिलाथिलामाइनलाई फेनिलालाइनमा जहिले पनि भ्रममा पार्छ, साथै सिटिसिनसँग सिस्टिनका साथ। कहिलेकाँही रासायनिक यौगिकहरू एकदम नजिकको हिज्जे हुन्छन्, र कहिलेकाँही ती समान संक्षेप हुन्छन्। म भन्न सक्दिन मलाई यो मन पर्यो, तर पाल्मिटोलेलेथेनोलमाइड एक मुखमा छन्। त्यसैले संक्षिप्त रूप मा यो धेरै सजिलो छ।
मैले यो मूत्राशय दर्द को लागी (अज्ञात कारण) लिए र यो महान काम। यो मेरो कुकुरको औषधीय व्यवहारमा पनि प्रमुख घटक हो (एलर्जीको लागि) र यसले सहयोग गर्दछ जस्तो देखिन्छ।
हाम्रो लागि कुनै साइड इफेक्ट छैन। मेरो निद्रालाई असर गरिन ओह! तर यसले मेरो घाउ घुँडाबाट पनि छुटकारा पायो, जुन एक अप्रत्याशित बोनस थियो।
पीईएले मलाई यो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ कि मसँग निरन्तर अपेक्षाकृत कम स्तरको दुखाइ छ, र यो राम्रो छ जब केही समयको लागि कम हुन्छ।
मैले लगभग एक दशकदेखि पुरानो पीठ दुख्ने समस्या भोगेको छु। पीईए यसलाई मध्यम बनाउँदछ, र जब मेरो पीडा सामान्य सुस्त चिढचिढाहट हुन्छ, PEA ले मेरो सम्पूर्ण शरीरलाई बढी आरामदायी महसुस गराउँदछ।
Palmitoylethanolamide एक अंतर्जात फैटी एसिड एमाइड हो। यसको मतलब यो अहिले तपाईको शरीरमा छ। केही व्यक्ति केवल यसलाई कम बनाउँछन्, र तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा तपाईंको स्तरहरू खस्छन्। त्यसैले पूरकले ती स्तरहरूलाई फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्दछ। यो खानामा पनि पाइन्छ। यो धेरै सुरक्षित छ। अधिकांश व्यक्तिहरू यो के हो बुझ्दैनन् र विन्दु पूर्ण रूपमा मिस गर्दछन्। यदि तपाइँ कोही हुनुहुन्छ जुन तपाइँको शरीरमा PEA को राम्रो प्राकृतिक स्तरहरू छन् भने, तपाइँलाई सम्भवतः केहि पनि महसुस हुँदैन। यद्यपि, स्वाभाविक रूपमा निम्न स्तरमा भएका मानिसहरूले प्रभावहरू कडा रूपमा महसुस गर्छन्। यसैले तपाईं यसमा ध्रुवीकरण हेराइहरू देख्नुहुन्छ।
अब तपाईंको COX-2 को बारेमा विशेष प्रश्नको बारेमा, यो COX-२ को एक मोड्यूलेटर हो, एक प्रतिस्पर्धी अवरोधकर्ता होईन। यो एन्डोकैनाबिनोइड रिसेप्टर्स GPR2 र GPR55 लाई बाँध्छ। त्यस्तै यसले साइक्लोक्सीजेनेज -२ (COX-२) को अभिव्यक्ति साथै inducible nitric oxide synthet (iNOS) लाई नियमित गर्दछ। यो एक PPAR-α एगोनिस्ट पनि हो, जसले IkB-alpha गिरावट र p119 NF-kappaB आणविक translocation नियमन गर्दछ। यसको PPAR-in affinities वास्तवमा कसरी यसले न्यूरोइन्फ्लेमेसन घटाउँछ। यसको प्रत्यक्ष बाध्यकारी affinities को शीर्ष मा, यो CB2 र CB2 रिसेप्टर्स को anandamide को बढ्दो बाध्यकारी हुन्छ, जुन तपाईको शरीरको प्राथमिक endocannabinoid हो। यो वास्तवमै कम्पाउन्ड हो!
केवल यो अपेक्षाकृत अज्ञात पदार्थको बारेमा पोष्ट गर्न चाहान्छु जुन लामो पीडा बिरामीहरूको लागि धेरै आशाजनक छ। Palmitoylethanolamide (PEA) एक फ्याट्टी एसिड अमाइड हो जुन प्राकृतिक रूपमा मानव शरीरमा र अन्य धेरै जनावर र बोटबिरुवाहरूको शरीरमा देखा पर्दछ। रीटा लेवी-मोन्टलसिनी नामक एक इटालियन डाक्टरले पीईएमा एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी र एनाल्जेसिक गुणहरू भएको पाए।
एक डबल अन्धा मा, प्लेसबो controlled 636 साइयाटिक दुखाइ बिरामीहरूको साथ परीक्षणमा नियन्त्रण गरियो, आधार रेखाको तुलनामा 50०% दुखाइ घटाउन उपचार गर्नको लागि आवश्यक संख्या 1.5 हप्ता उपचार पछि १.3थियो।
पीईए धेरै प्रकारका पीडाको लागि अनुसन्धान भइरहेको छ। मैले भन्न सक्ने कुनै पनी साइड इफेक्ट अवलोकन गरिएको छैन।
एक मिनी समीक्षा जुन लामो दुखाइको उपचारमा Palmitoylethanolamide को प्रयोगको बारेमा चर्चा गर्दै। त्यहाँ आईबीएस बिरामीहरू र आईबीएसको जनावर मोडेलहरूमा थोरै मात्र अध्ययनहरू छन्। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालीमा एन्डोकानाबिनोइड प्रणालीको भूमिका दिएपछि यो पीईए र सम्बन्धित रिसेप्टर्सको भूमिकाको पीडाको उपचारमा अन्वेषण गर्न एक रोचक लेख हो।
Palmitoylethanolamide (PEA) कत्तिको सुरक्षित छ?
मैले भर्खरै केही PEA पाउडर अर्डर गरें र यो आज मेलमा आइपुग्यो। म PEA को साथ कुनै जोखिम थियो कि छैन भन्ने बारे केहि अतिरिक्त अनुसन्धान गर्दै थिए किनभने यो COX2 अवरोधक हो।
के यो सुरक्षित छ PEA लिनका लागि?
Palmitoylethanolamide एक चमत्कार जस्तै मेरो स्नायु दुखाई निको भयो!
म यसलाई बाहिर फ्याँक्न चाहान्छु किनभने म जस्तो अरू कसैलाई पनि यो फाइदाको रूपमा पाउनेछ। म २० भन्दा बढी वर्षदेखि अतुलनीय स्नायु दुखाइमा छु। म स्टानफोर्डमा आएको छु, फेन्टानेलदेखि मोर्फिनदेखि अक्सी र बेंजोस, एन्टिप्रेडन्टस इत्यादि सबैमा। मैले धेरै शल्यक्रिया गरें र वर्षौंको दौडान मैले धेरै कुरा गरें तर एक जनाले भनेन कि म यो सरल पदार्थ प्रयोग गर्छु। केहि चीजले सहयोग पुर्‍यायो तर केहि काम आएन। यसले हरेक चोटि चोट पुर्याउँदछ जब म राख्छु वा बस्छु। कहिलेकाँहि हिंड्न गाह्रो थियो। पुरानो शल्यक्रियाबाट मेरो तल्लो मेरुदण्डमा यो स्नायुको समस्या हो। निन्द्रा भनेको एक पटकमा 20० मिनेट जति भयो र प्रायः कुनै कुराको बिना दिनहरू गयो।
भर्खर मैले चिनेको कसैले सुझाव दिए म PEA नामक केहि प्रयास गर्छु। मसँग शून्य विश्वास थियो यसले काम गर्दछ। तर यो पर्याप्त सुरक्षित देखिन्थ्यो। मैले यो पदार्थ सुरू गरें जुन अमेजनमा उपलब्ध छ र 60० बर्षको लागि अध्ययन गरिएको छ तर मैले यसबारे कहिल्यै सुनेका थिएनु। यसलाई Palmitoylethanolamide भनिन्छ (PEA, Phenethylamine जो संक्षिप्त PEA संग भ्रमित गर्नु हुँदैन) Palmitoylethanolamide स्वाभाविक रूप बाट हाम्रो शरीर र हाम्रो आहार मा पाइन्छ। यो एक "फ्याटी एसिड एमाइड" हो जसले एन्डोकानाबिनोइड प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्दछ (र एन्डानामाइड, हाम्रो एन्डोजेनस क्यानाबिनोइडलाई बढावा दिन्छ)।
म दिनमा दुई पटक १२० मिग्रा लिन्छु। सुरुमा मैले केहि पनि याद गरेन। वास्तवमा पहिलो हप्ता मैले केही समयमा भोगेका खराब नराम्रा चीजहरू मध्ये एक थियो। दोस्रो हप्ता म एक रात बिहान ब्यूँझेको महसुस गरेर म रातभर सुतिरहेको थियो। मेरो पीडा समाप्त भयो। मैले महसुस गरें कि यो फ्लोक थियो। म खुशी देखि चिच्यायो कुनै पनि कम। यो पहिले केहि दिनको लागि बन्द गरिएको छ। यो एक महिना भन्दा बढी राम्रो भयो र अझै कुनै पीडा छैन। पीईए एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी र स्नायु दुखाईको रूपमा काम गर्दछ। एफडीए द्वारा केही सानो क्लिनिकल परीक्षण पनि यी क्षेत्रहरूमा प्रतिज्ञा देखायो।
त्यहाँ पीईएले सबै प्रकारका चीजहरू निको पार्ने दाबी गर्दै छन्। सबै को बारे मा IDK। मलाई थाहा छ यसले मेरो पीडालाई मद्दत गरिरहेछु जस्तो मैले कहिल्यै लिएको कुनै चीज भन्दा बढी छ। म मेरो दुखाइ 100% मा दूर गरीएको छु। म मेरा सबै मेडहरू बन्द गरें र अझै पीडा छैन !!! मेरो डाक्टरहरूको दिमाग उडाइसकेको थियो र उनले केहि अन्य बिरामीहरूसँग यो प्रयास गर्दैछिन्।
यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने यसलाई राम्रो हप्ताहरू दिनुहोस्। यो शटको लायक छ। यो अन्य मेडसँग अन्तरक्रिया गर्न ज्ञात छैन वा ज्ञात विषाक्त सीमा छ तर केहि जस्तो ढिलासँग सुरू हुन्छ। M००mg भन्दा माथिको डोजले मलाई हल्का टाउको दुखाइ दिन्छ।
यसले केवल मेरो स्नायु दुखाइमा काम गर्दछ। मलाई अझै सामान्य दुखाइ र पीडा महसुस हुन्छ। अन्यथा म अझै राम्रो महसुस गर्दछु। यदि तपाईं परिधीय स्नायु दुखाइबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने यो शट दिन लायक छ।
म्याग्नेशियम पागल सपनाको कारणले कुख्यात छ,--HTP सपनाको साथ अन्तर्क्रिया गर्दछ।
ओछ्यानमा जानु भन्दा पहिले म nes घण्टा भन्दा कम म्याग्नीशियम लिन सक्दिन वा अन्यथा म यति धेरै सपना देख्छु, मलाई राम्रो निन्द्रा लाग्दैन।
मैले हालसालै Palmitoylethanolamide देखे र म यसलाई प्रयास गर्छु। यो एक हप्ता को लागी आएको छ या त मैले यो प्रयोग गर्न शुरू गरेको हो र यसले मलाई धेरै नै मद्दत गर्‍यो।
यसले मलाई धेरै आराम पाएको अनुभव गर्दछ जुन मैले आशा गरेको थिएन।
पाल्मिटोयलेथेनोलामाइड, चिकित्सा उद्देश्यका लागि विशेष खाना, पुरानो दुखाइको उपचारमा: एक पूल गरिएको डाटा मेटा-विश्लेषण। https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Palmitoylethanolamide बनाम Oleamide
विषयगत रूपमा, यी दुई फ्याटिड एसिडमा तपाईंलाई कसरी असर पार्छ त्यसमा कुनै फरक छ?
तिनीहरू दुबै मोआमा समान देखिन्छन्, निश्चित छैन कि यदि यसलाई एक अर्कामा प्रयोग गर्नु उचित हो भने। मुख्यतया इम्यून ब्यालेन्सिंगको खोजी गर्दैछ, निद्राको गुणस्तर वृद्धिको लागि बोनस।
स्थिरता राम्रो, सेतो पाउडर थियो। चालै नपाई, यो स्वादहीन थियो र धेरै बिस्तारै विघटन भएको थियो, हुनसक्छ किनभने पानीमा घुलनशील छैन।
मैले लिनको लागि सुरू गरेको समयबाट लगभग १० दिन भित्र मसँग एक ठूलो अनुभव भएको छु।
अब केहि महिना भइसक्यो र मलाई यो मनपर्‍यो। म धेरै राम्रो महसुस गर्दछु र मैले कुनै साइड इफेक्ट देखेको छैन।
म twice०० मिलीग्राम दुई पटक लिन्छु र एक हप्ता भन्दा केहि बढीको लागि र नतिजा उल्लेखनीय छन्।
मलाई म्याग्नीशियमको समस्या छैन तर bedhtp सुत्नु अघि मलाई सपना देख्नुभन्दा पहिले। मैले दिउँसो hhtp सार्नु पर्छ।
Palmitoylethanolamide ले मलाई fibromyalgia दुखाइबाट राहत दिएको छ। र म अब उप्रान्त निद्रामा रिबारले पिटेको जस्तो महसुस गर्दैन।